Atody mihidy: fifantenana henan'ankizy, toe-java-manan'aina - Famporisihana voajanahary - 2020
Ny fikolokoloana sy ny fikarakarana ny akoho dia tsy asa tsotra fotsiny, fa tena mahasoa.
Ankoatr'izay, raha vantany vao nividy akoho teny an-tsena ianao, dia tsy mila mandany vola intsony mba hahazoana taratra vaovao ho an'ny vorona.
Raha ny marina, nahoana no tena olana hafa, raha ny ankamaroan'ny zava-manan'aina dia manamboatra ny fifehezana sy ny fikarakarana ny zanany.
Ny lahatsoratra etsy ambany dia ho tanteraka amin'ny endri-piainan'ny atody voajanahary na, amin'ny teny hafa, ny fampidirana azy ireo.
Hiresaka amin'ny an-tsipiriany momba ny fomba, rehefa sy ny habetsahana hametrahana atody eo ambanin'ny hen raha te hahazo vorona tsara tarehy tanora.
Ary raha ny heniheny rehetra, tsy misy olona maniry hanongotra ny atody?
Ny toetra sy ny fepetra takiana amin'ny atody
Sakafo ho an'ny renim-pianakaviana
Inona no toerana tsara indrindra hambolena vorona amin'ny atody?
Miresaka momba ny endrik'ireo zazakely tsara indrindra isika: amin'ny fepetra inona no safidy?
Rahoviana no fotoana tsara hambolena henan'akoho?
Ny faharetan'ny fifindran'ny atody amin'ny karazan-tsakafo isan-karazany
Firy ny atody azoko apetraka eo ambanin'ny rongony ary inona no miankina amin'io isa io?
Mikarakara ny vorona sy ny akaniny rehefa manidina atody
Ny endriky ny fisehoan'ny tanora
Ahoana no ahafantarana ny vorona iray izay vonona ny manisy atody: ny marika famantarana ny henany
Ny fampiasana henan'alika dia misy tombontsoa maro noho ny fampidiran-drivotra mahazatra.
Mazava ho azy, noho ny fanampian'ity fitaovana ity dia ho afaka haka tahiry kely be dia be ianao ao anatin'ny fotoana fohy, nefa iray monja dia manjary tsotra izao ny fanontaniana: ahoana no fomba hitazonana azy ireo bebe kokoa sy ny fomba hikarakarana azy?
Ho an'ny olona iray, ny fikarakarana ny akoho kely na ny kodia turkey dia orinasa iray tena mampidi-doza, raha ny henan'ingahy dia hiatrika ity tsotra sy tsotra ity.
Anisan'ireo karazam-borona, gisadia, trondro ary karazam-borona hafa izay mahazatra indrindra amin'ny toeram-pambolena ao an-toerana, dia hita amin'ny ankamaroan'ny vehivavy ny atodin'ny atody.
Ny olana amin'ny alikaola dia tsy hita raha tsy mitazona ireo toeram-piompiana sy toeram-pambolena sy toeram-pambolena, izay toerana voafetra ao amin'ny faritra ho an'ny mandeha.
Mba hahafantarana fa vonona ny hanongotra ny vorona iray, afaka mivantana avy amin'ny fitondran-tenany ianao:
Ny renim-pianakaviana iray manana fikorontanana mitranga dia manomboka mitebiteby.
Mety maharitra ela izy io ao amin'ny akaniny, ary avy eo dia tsy maintsy entina haka ny atody.
Mety hanjary hafahafa izany, rehefa manomboka manongotra volo ny tenany, mba hampidirana azy.
Mihena ny habeny sy ny kavina.
Ny fametrahana ny atody amin'ny ho avy ny henany dia hijanona tanteraka.
Rehefa voamarikao ny kuru toy izany eo amin'ny biby fiompinao, tsy tokony ho haingana ianao ary hamboly azy avy hatrany amin'ny atody faran'izay betsaka. Raha ny marina, mila vorona manana toetra tonyka amin'ny antsasaky ny fotoana voatondro dia tsy namela ny akany. Noho izany dia ilaina ny manamarina avy hatrany hoe ahoana ny "faniriany": mandritra ny 2-3 andro dia mametraka atody an-tsokosoko eo ambanin'ny akoho izy ireo.
Raha, rehefa afaka 2 andro, dia nandao ny akany izy ary tsy nijanona intsony, tsy hisy henan'alika intsony. Raha nijanona teo amin'ny toerana taloha ianao ary tsy nitsangana mihitsy aza ianao dia afaka mametraka atody tsy an-kijanona eo ambaniny.
Raha ny marina, izany dia mitranga matetika. Aza tezitra anefa. Azo atao koa ny mampivelatra ny fikorontanan'ny tosidra. Mba hanaovana izany, misafidy ny lay tsara indrindra (na izany na tsy izany, mandritra ny vanim-potoana fanatsarana ny vorona dia very ny ampahany faheniny amin'ny lanjany teo aloha) ary ny tena mampanahy indrindra amin'ny temperament.
Tokony ho tratra izy ary, raha ny marina, dia mipetraka amin'ny atody an-tsokosoko, manarona ny tampony amin'ny sobika. Raha tsy manidina ny akany izy, rehefa afaka andro vitsivitsy dia manainga ny sobika, dia afaka mametraka tena atody eo ambanin'izany ianao.
Aza hadinoina anefa ireto hevitra manaraka ireto:
Aza avela ho afa-po ny vorona. Na dia misy mitefoka na parasy hafa aza hita eo amin'ny vatan'ny akoho, dia tokony ho raisina an-tanana izany, manome ala volamena sy fitsaboana amin'ny fanomanana manokana.
Alohan'ny fampidirana, tokony hiezaka ny hanome sakafo ny akoho araka izay azonao atao ianao.
Tsara kokoa ny manamboatra vorona amin'ny atody amin'ny hariva, na amin'ny alina aza, mba tsy hitebiteby.
Raha manana zana-bolo maro be ianao, dia mila manaisotra azy ao anaty rano ianao ary manakatona izany ao amin'ny efitrano mafana sy maizina. Alefaso indroa isan'andro fotsiny izy mba hamahana. Rehefa averimberina imbetsaka ny dingana toy izany, dia tsy mitomany intsony ny akoho.
Mahaliana koa ny mianatra momba ny fananganana trano amin'ny tananao manokana.
Tsy azo atao ny mametraka ny atody misy eo ambanin'ny akoho, satria mety tsy hampiroborobo azy rehetra izany. koa, dia tsy afaka mampiasa ireo atody voatahiry ao amin'ny vata fampangatsiahana, na nafindra toerana hafa.
Amin'ny ankapobeny dia tandremo:
Ao amin'ny andian'ireo akoho dia misy fiantraikany tsara amin'ny roosters sy ny vavy. Ohatra, ho an'ny zana-katsaka, ny akoho iray dia ampy ho an'ny andian'ireo akoho eo amin'ireo olona 10-12.
Ny atody dia nalaina avy tamin'ny akoho nify, izay efa nahatratra ny fahamaotiana (ao anatin'io vorona io, manomboka amin'ny 7 volana ny fe-potoana).
Ho an'ny fahasitranana, dia nisy atody vaovao nampiasaina, izay nopotehan'ny akoho tsy ho 6 andro lasa izay.
Ny ody alohan'ny fampidiran-drano dia voangona amin'ny hafanana 15-20 ° C, raha milatsaka 75%.
Tsy misy atody tsy simba sy rava.
Ny atody misy menamena dia napetraka eo ambanin'ny akoho, satria ny ankamaroan'ny embryos dia hita any amin'ny madinika, ary ny zozoro lehibe amin'ny lehibe.
Ny atody dia voamarina avy amin'ny ovoscope noho ny fisian'ny singa samihafa.
Tsy maintsy alamina mialoha ny akanim-borona. Amin'ny haben'ny tarehimarika dia tokony ho toy izany ny atody sy ny henan-kisoa ary ny atody dia tsy manaloka azy.
Tsara kokoa - 55 hatramin'ny 35 santimetre.
Ny endriky ny akanim-borona dia tokony ho kofehy tsara tarehy, misy tsilo eny amin'ny fotony sy ny mololo izay narotsaka ambony.
Tsara ny manamboatra ny akanjo toy izany mba hahafahany mamela malalaka ny akany rehefa te hihinana sy hisotro izy.
Ny nosy dia azo ampiasaina mandritra ny taona maromaro isan-karazany, ny fanadiovana azy ireo alohan'ny hametrahana azy ireo.
Ny toerana ho an'ny akoholahy akoho dia tokony hipetraka ao amin'ny toerana mangina ary, raha mety, lavitra ny toerana hafa. Tokony hapetraka ao an-tsainy malalaka ilay akoho, mahatsiaro ho tony sy ho voaro.
Tokony homen-danja manokana ny fiarovana raha matetika miditra ao amin'ny tranonao ny raty. Amin'io tranga io Matetika no mihantona ny akany neny, na tsy natsangana mivantana teo amin'ny tany, fa tamin'ny fanamboarana manokana.
Raha misy zazakely maro, dia tsara kokoa raha tsy manamboatra azy ireo ao amin'ny efitra iray. Ny akaiky toy izany dia mety hiteraka ady goavana ho an'ny akany sy ho an'ny atody. Noho izany, ataovy ny elanelana eo anelanelan'izy ireo, fara fahakeliny, maniry ny mba tsy hifankahazo na ny havoana.
Azonao atao ny manafina azy ireo amin'ny sobika mpanangom-bokatra, ka mampitombo ny halavan'ny havoana.
Ireo manam-pahaizana manerantany tsara indrindra dia ahitana ireo akoho izay solontenan'ny hena sy ny zozia. Tena tsara koa Ny fitaomam-pitokisana dia maneho ny tenany ao anaty akoho madioizay matetika no mitoetra ao an-tanàna.
Ny ankamaroan'ny akoho farany dia manana volom-borona mahavelona, ​​tsy misy fandaniana be loatra mandritra ity vanim-potoana ity. Manamboatra "reny" tsy manam-pahaizana koa izy ireo, izay afaka mikarakara tsara ny taranany.
Maro ihany koa no manoro hevitra ny fisafidianana ny zazakely araka ny teti-drany, izany hoe, mifidy azy ireo araka ny toetran'ny reny. Raha tena "masiaka" be di-doha dia mamihina ny akoho, avy eo avy eo ny zana-kisoa no ho mora indrindra.
Tsara homarihina fa afaka manosotra atody amin'ny karazana biby toy izany ny soavaly toy ireny. Ho an'ny fikarakarana ny akoho ihany koa Matetika mampiasa karbôna. Ny tombontsoan'izy ireo dia ny fahafahan'izy ireo mipetraka amin'ny atody, ankoatra izay, betsaka kokoa noho ny akoho.
Na izany aza, dia tsy tokony horaisina an-tsokosoko ireo hantsana ireo izay nentina niaraka tamin'ny ratra. Na dia avy amin'ny 30 toy izany aza dia manomboka mipoaka ny lohataona amin'ny lohataona, izany dia tranga tsy fahita firy.
Ny fihinanan-koditra toy ny karazana atody dia ratsy ihany koa amin'ny fandrosoana. Amin'ny ankapobeny, tsara kokoa ny mametraka atody amin'ny akoho Legorn na rosiana efa hatry ny ela eo ambanin'ny henan'alika hafa.
Ny fikorontanan'ny tosidra dia matetika miseho amin'ny vorona rehetra amin'ny faritra avaratra amin'ny lohataona. Izany dia tena lojika, satria ny fitomboan'ny tanora miposaka amin'ny lohataona dia manana fotoana hivoahana tsara mandritra ny vanim-potoana mafana ao anatin'ny taona ary mihamatanjaka hatrany amin'ny fararano sy ny ririnina.
Amin'ny ankapobeny, mandritra ny fe-potoana fohy toy izao, ny solon'izy ireo dia nosoloina volom-borona feno, izay hiaro ny vorona amin'ny hatsiaka mafana.
Nefa amin'ny lohataona dia mila maminavina tsara ny fotoana, satria azonao atao ny manamboatra ny akoho vao maraina. Amin'ity tranga ity dia hisy loza goavana amin'ny fahafatesan'ny tanora tsy dia matanjaka, satria amin'ny lohataona dia matetika dia mangatsiaka be ny hatsiaka.
Ideal to Ny hena dia nipetraka teo amin'ny atody tamin'ny tapaky ny volana aprily, dia hiseho amin'ny fiantombohan'ny May maromaro ny akohovavy. Na dia voafaritra kokoa aza ny famaritana ny fotoana toy izany, dia mila mifantoka amin'ny toetry ny rivotra iainanao manokana ianao.
Ny vanim-potoan'ny akoholahy manindrona ny atody no fohy indrindra, raha ampitahaina amin'ny karazam-biby hafa rehetra. Noho izany, ao anaty akoho, io vanim-potoana io dia tsy maharitra mihoatra ny 20-21 andro. Nefa amin'ny kirany sy ny trondro dia ny tanora ihany no miseho amin'ny 27-28 andro manomboka amin'ny fotoana izay nipetrahan'ny vorona voalohany amin'ny atody miaraka amin'ny atody.
Ny gisa no lava indrindra amin'ny akany - 28 ka hatramin'ny 30 andro. Amin'izany fotoana izany, na indray andro iray alohan'ny fiafaran'ny daty voalazan'ny fandrombaham-bolo, manomboka manomboka ny atody. Amin'izao fotoana izao, ny akoho dia akoholahy efa feno tanteraka, izay mikapoka ny ao anaty akorany, miezaka ny mivoaka.
Tena zava-dehibe ny tsy miditra amin'io dingana io raha tsy mila izany. Ny zava-misy dia manjary manakorontana indrindra ny henany amin'izao fotoana izao, noho izany, tsara kokoa ny tsy manelingelina azy indray. Raha any am-parany, dia misy atody 1-2 izay tsy azon'ireo akoho hiposaka, dia afaka manampy azy ireo ianao.
Io tarehimarika io dia miankina mivantana amin'ny halehiben'ny henany. Raha lehibe ny akoho, dia ho afaka hanarona atody maro miaraka amin'ny vatany. Amin'ny ankapobeny dia atody 13 ka hatramin'ny 15 no napetraka tsirairay. Rehefa manodinkodina ireo atody lehibe kokoa amin'ny karazan-tsigara hafa dia tokony hihena ny isany. Diniho ireto manaraka ireto:
Ny isan'ireo atody dia tokony ho azon'izy ireo atao ny mipetraka tanteraka eo ambanin'ny hen. Raha hitanao fa misy atody iray na roa tsy afaka manamboatra ny renim-pianakaviana iray, tsara kokoa ny manangona azy ireo mandra-pahatonga azy ireo hiharatsy.
Ny atody eo ambanin'ny akoho dia tokony handry iray isa.
Aza asiana atody any amin'ny akanim-borona mandritra ny dingam-pikatrohana. Ny zava-marina dia aorian'ny fijerin'ny akoho voalohany, ny akoho dia hamela ny akanim-borona, ary ireo atody ireo dia halefa fotsiny ho foana.
Ny zavatra voalohany tokony hikarakaranao rehefa mametraka atody ianao dia mamelona azy. Ny havoana sasany dia mety ho mafy loha ka tsy handao ny akaniny mandritra ny vanim-potoana iray manontolo. Noho izany, tsy maintsy atao manokana izy io mba hihinana, na Asio sakafo sy rano eo anoloan'ny akanin'ny vorona.
Na izany aza, amin'ny rano dia mila mitandrina tsara ianao ary ataovy izay tsy ahafahan'ny vorona manodina ilay sambo miaraka aminy ary tsy manondraka ny akaniny. Na dia manan-danja aza ny rano ao anaty akanim-borona dia mametraka sambo iray amin'ny rano izay ahafahan'izy ireo milomia kely.
Ny sakafo ihany koa dia manana fepetra manokana: tsy tokony ho maina izany, satria amin'ny endriny io dia mety miteraka aretina ao amin'ny hen izy io.
Ny 2-3 andro voalohany dia tsy hipoitra avy amin'ny atody intsony ny vorona, ka tsy maintsy esorina ao amin'ny akaniny izy ary entina miaraka amin'ny sakafo sy ny mpihinana. Indraindray, aorian'ny fiterahana, afaka mandeha foana ny akoho, noho izany dia mila averina indray izy ary mipetraka amin'ny atody.
Amin'ny hoavy, heverina ho ara-dalàna raha misy vorona miakatra avy ao amin'ny akanim-batravatra 2-8 mba hihinana, ary ny atodiny fotsiny mandritra ny 10-15 minitra.
Na dia tsy misy akoho ao amin'ny akany aza, dia afaka manara-maso ny atody sy ny akaniny ianao, manamboatra ny fako, manolo azy amin'ny maina (raha mila iray ianao).
Tena be Zava-dehibe ny hanamarina ny atody amin'ny fotoanamba hamaritana raha tsy misy ny tsy fahafahana eo anivon'ireo izay hamiratra. Raha toa ka mamokatra izany, dia ho hitanao ao anatin'io vanim-potoana io ny embryon iray ao amin'ny endriky ny toerana maizimaizina sy ny marika amin'ny rafi-pitatitra amin'ny ho avy.
Ary koa, mitranga izany fa ny fivoaran'ny embryon noho ny antony iray na iray hafa dia mitsahatra. Amin'ity tranga ity, ao anaty atody, dia hahita ny peratra amin'ny rà ianao na ny boribory tokana.
Indray mandeha indray dia sarotra ny mijery ny atody eo ambanin'ny famonoana, ao anaty akoho dia ny faha-19 andro, anaty kata sy kekika - faha-26, ary amin'ny gisa - 27-28. Zava-dehibe ny manala ny ati-doha ao amin'ny akanin'ireo atody izay misy embryonona mangatsiaka izay heverina ho toy ny volon'ny maizina tsy misy fantson-dra.
Zava-dehibe iray hafa amin'ny fikarakarana ny renim-boromailala dia ny fandinihana ny toe-tenany manokana. Tsy dia misy fiovana firy ary tsy manana fahafahana tsy tapaka haka biriky vovoka, ary koa balsama lavenona, ny akoho dia afaka mahazo parasy. Raha azo atao dia ilaina ny manamarika sy manakana ny fielezany.
Araka ny efa nambarantsika, ny akoho dia manomboka amin'ny alàlan'ny 19-21 andro manerana izao tontolo izao. Mivoaka avy ao amin'ny atody izy ireo, mangatsiaka izy ireo, saingy rehefa avy nipetraka mandritra ny ora maromaro izy ireo dia maina tanteraka.
Fa efa maina izao, dia asaina manala azy ireo hiala ny reniny mandritra ny fotoana fohy ary hametraka azy ireo ao anaty boaty miaraka amin'ny lamba malefaka sy matevina. Amin'izany fotoana izany, dia tokony hotehirizina ao anatin'ny hafanana mahazatra 26 ka hatramin'ny 28 º C.
Izany fepetra izany dia natao mba hahazoana antoka fa ny akoho dia mipetraka amin'ny atody sisa. Raha ny zava-drehetra, ny henan'ingahy dia manana toe-javatra toy izany - ny mamela ny akanim-boroka avy hatrany taorian'ny nahaterahan'ny zazakely maro. Azo atao ny mihazakazaka ny akoho rehetra eo ambanin'ny hen raha tsy aorian'ilay akoho farany avy amin'ilay atody farany ambany.
Hery manan-danja izany Ho an'ny renakoho iray dia afaka mipetraka ianao ary akoho hafa, indrindra fa any amin'ny tranombakoka.
Raha avelao izy ireo hanakaiky ny renim-pianakaviana miaraka amin'ny zanany, ary ataovy izany amin'ny hariva hariva amin'ny sakafo, tsy hahatakatra na inona na inona izy. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny isan'ny akoho dia tsy mendrika izany, satria ny akoho iray no mahavita mitondra olona 25.
Ao amin'ny fikarakarana ireo akoho efa reraka sy ny zanany dia ireto manaraka ireto:
Tsy maintsy omena sakafo be ny akoho, ary tsy miankina amin'ny sakafo be dia be, fa ny vidiny mahavelona amin'ny vorona. Zava-dehibe indrindra ny mampifangaro ny voa sy ny varimbazaha.
Ny famatsiana ireo akoho dia manomboka amin'ny atody manjera, izay vokatra avy amin'ny solika, voankazo voarara no omena tsikelikely, avy eo dia azo atao ny mivezivezy amin'ny menaka maina.
Tena zava-dehibe ho an'ny sipa sy ny tanora ny misotro rano madio sy madio, izay laharam-pahamehana voalohany. Hevero fa mila mpihinana iray ny akoho iray sy ny akoho kely.
Zava-dehibe ny manafaka tsy an-kijanona ireo zatovo ho an'ny fiaramanidina, saingy tsy maintsy misy toerana iray ao anaty penso izay ahafahan 'ilay hen raha miafina amin'ny toetr'andro. Ilaina ihany koa ny mandray fepetra hiarovana ireo vorona avy amin'ny biby mpihaza.
Karazana bakteria manao ahoana no miampita sy ny fomba hanaovana izany
Dibera tsara tarehy miaraka amin'ny tsiron-tsakafo - ny karazana "Chocolate"
Borovaina uterus (orthilia iray sided): fampiasana fanasitranana ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy
Ahoana ny fomba hanaovana ny lavaka na ny banga ao amin'ny tohotra ho an'ny tantely amin'ny tananao
Famaritana ny karazana sy ny tsiambaratelon'ny fambolena - cherry tomato Cherry mena
Arizema (odnopokrovnitsa): mamboly sy mikarakara zavamaniry maniry
Inona no fahadisoana rehefa mampiroborobo zaridaina rosiana ny ankamaroany
Karazana fambolena gordoviny
Copyright 2020 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Ny fanangonana tovovavy tanora amin'ny alàlan'ny voajanahary voajanahary